Manni marii Itoophiyaa Labsii Yeroo Muddamaa kaase - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Manni marii Itoophiyaa Labsii Yeroo Muddamaa kaase
Manni Marii Itoophiyaa Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) baatii afuriif ture guyyaa har’aa kaase. LYM kun kan ka’e haalli nageenya biyyattii abdachiisaa ta’uun isaa erga mirkanaayee booda.
LYM kun akk ak’uuf dhiibbaan godhama atureera. LYM akka hin kaane kan fedhu OPDO dha jedhamaa tureera. Dr aangoo qabatee LYM baatii lama keessati kaasuun isaa qeeqni #TeamLemma irratti geggeffama ature kan bu’uura hin qabne ta’uu isaa mirkaneessa. Dr Abiyyi, Ob Lammaa, miseensonni paarlaamaa fi Oromoon hundi baga gammaddan! Ololli akkanaa mogolee wolii buusuu, diina jalatti wolkuffisuu fi saba kana burjaajessuu malee faaydaa biraa hin qabu.
Labsiin kun ka’uun hunda caalatti Poolisii Oromiyaa waa’ee nagaa fi tasgabbii (woraana daangaas dabalatee) Oromiyaa akka eegsisu, akkasumas sochii kontrobaandii akka gufachiisuuf isa gargaara. Itti gaafatamummaan Poolisiin Oromiyaas Ob Lammaa jalatti ta’a jechudha. Kuni waan guddaadha.
Dr Abiyyiif yeroon, tumsaa fi deeggarsi cimaan kennamnaan gaafiin ummataa dhawaataan deebii akka argatu yoomuu caalatti hubataa dhufneerra. Osoo Woyyaaneen mormitu Dr Abiyyi Oromoo fi saboota amaneeti kan Labsii Yeroo Muddamaa kana kan kaase. Nutis isa amanuu fi garee kanarratti abdii horachuu qabna. Kana booda maaltu ta’uu mala? Woyyaaneen maqaa Qeerroo ykn gaafii jedhuun faaydaa isiif jecha ummata keenna gara hookkaraatti dhiibuudhaan magaalaa fi baadiyaa Oromiyaa gara dirree jeequmsaatti deebisuudhaaf dhama’uu irraa uf duuba hin jettu. Kan jedhaa jirtu yoo LYM ka’e Itoophiyaan dirree jeequmsaa fi hookkaraa taati jechuudhaan sodaachisaa jirti. Bifa kamiinuu yoo ta’e hawwii Woyyaanee jaamsuu malee dhugoomsuu hin qabnu. Tasagbbii fi naamusaan gaafiin saba kana deebii akka argatu amma hubataa dhufneerra. Bakka amma geene kanaa, waa hunda caalatti Dr Abiyyii fi Ob Lammaa dhaggeeffataa, gorsaa fi kallattii isaan kaayan fudhataa deemun barbaachisaadha. Woldhagayuu diduudhaan wanti gara hookkara kaasuu fi dhiiga dhangalaasuutti Oromoo geessu hin jiru. Dhiigaan bakka kana genneerra. Kana booda lubbuu qusachuu fi waan hanga ammaa arganne tooftaadhaan tikfachuudha kan nurraa eegamu. Woliif abboomuu diduun seerdhabdummaa Oromiyaa keessa babadhisa, hiyumma akeessa nu tursiisa.
Tankaarfiin Dr Abiyyi fudhataa jiru akkuma hedduu nu gammachiisuu fi nu abdachiisu diinatti ammoo madda yaddoo fi bowwoo ta’eera. Dr Abiyyii fi Ob Lammaa tikfachuun dirqama Oromoo fi saboota Itoophiyaa cunqursa, saamichaa fi shira Woyyaanee jalaa bayuuf hawwii qabaniiti. Gadadoo fi saamicha woggaa 27 booda namoota onnee irraa jijjiirama dhugaaf hojjataa jiran kana argachuun Oromoo fi saboota haqaa fi dimokraasii dheebotaniif dhugatti carraa guddaadha. Carraan yeroo hunda hin dhuftu tan argamte tanatti fayyadamuun abshaalummaadha.
Previous articleJilli hooggana ol’aanaa ODF/ADO Kiibxata gara Finfinneetti imala
Next articleDr Abbiyyii fi Ob Isaayyaas woliigaltee nagaa, diinagdee fi dippiloomaasii mallatteessan